Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/24 Oktobra 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/24 Oktobra 2013
nazahoany (nitranga in-1) : Ho fitakiana ny famerenana amin'izy ireo ny tany nato-kana ho fiantsonan'ny fiara, izay nangatahany tamin'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) ary efa nazahoany fankatoavana, dia nanapa-kevitra ny tsy hifidy izy ireo ny zoma izao. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
Fananadinana (nitranga in-2) : Fananadinana > Manomana fanadinana ho fampiaka-rana ny mari-pahaizan'ireo mpiasany ny Tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana sosialy (Cnaps). (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
tatitry (nitranga in-1) : Voafonja iray hafa, voalazan'ny tatitry ny zandarimaria indray fa inian' ny mpiandry fonja avoaka mba hanao fanafihana mitam-piadiana. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
nampisahanina (nitranga in-1) : Nanainga ireo olom-pirenena rehetra mba handray anjara feno amin' ny fifidianana koa ity rafitra izay nampisahanina ny fampihavanam-pirenena ity. (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
Saint (nitranga in-1) : Vokatra
Steaua Bucarest # FC Bâle (1 – 1) Schalke 04 # Chelsea (0 – 3) Olympique de Marseille # Naples (1 – 2) Arsenal # Dortmund (1 – 2) Austria Vienne # Atletico Madrid (0 – 3) FC Porto # Zenit Saint Petersbourg (0 – 1) Celtic Glasgow # Ajax (2 – 1) AC Milan # FC Barcelone (1 – 1). (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
handball (nitranga in-1) : tsy hisy indray ny fifanintsanana any amin'ny faritra atsimon' ny Nosy eo amin'ny handball raha efa samy nahavita ny anjarany ny tany Avaratra sy ny teto Afovoan-tany. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
Andoharanofotsy (nitranga in-1) : zandary iray no noahiahiana ho isan'ireo mpandroba tamin'ny vaky trano nisesy teny Andoharanofotsy. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
Nanainga (nitranga in-2) : Nanainga ireo olom-pirenena rehetra mba handray anjara feno amin' ny fifidianana koa ity rafitra izay nampisahanina ny fampihavanam-pirenena ity. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
tarihiny (nitranga in-1) : Rehefa tarihiny mandeha mamonjy ny reniny any am-pivarotana aho, na dia akaiky aza ilay toerana, dia tsy manaiky izy raha tsy misolo akanjo ary izy ihany no misafidy izany», hoy indray ny rainy nanao tsiahy ny fotoana niarahany tamin'ilay menaky ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
hilefitra (nitranga in-1) : tsy hilefitra ary tsy hitsitsy mihitsy ny mpitandro ny filaminana raha toa ka misy ny fihoaram-pefy miendrika fanakorontanana mialoha sy mandritra ary aorian' ny fifidianana. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
Monique (nitranga in-1) : Ny vahoaka ihany koa anefa dia afaka mandray anjara amin' ny fanamboarana», hoy Monique Raharinosy, lehiben'ny tetikasa 3P. (FOTODRAFITRASA-Nohavaozina ny lalan-kely eny Ambondrona-Ambodifilao)
Rafanoharana (nitranga in-1) : Nanome toky ihany koa ny jeneraly Gabriel Rafanoharana, isan'ireo mpitarika ny Emmo-Far fa tsy maintsy hofehezina tanteraka ny fitandroana ny filaminana aorian'ny fifidianana. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
Randrianarivelo (nitranga in-3) : «Tena hainy tsianjery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io hira io», hoy ny rainy, Randrianarivelo Henintsoa Elie, izay hita ho mbola tena ao anatin'ny fangirifiriana tanteraka. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
mpifanandrina (nitranga in-1) : Ankoatra izay dia nisy ihany koa famelezana totohondry an-kitsirano nataona mpilalao iray avy eo amin'ity mpifanandrina amin'izy ireo ity an'i Lanto teo imason'ny mpitsara saingy tsy nahazoana karatra mena fa nijanona ho mavo. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
noesory (nitranga in-1) : Nanana kavina volamena i Sylvie izay tsy noesorin'ny ray aman-dreniny mihitsy raha tsy tapa-bolana nialoha ny nandaozany ny tany. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
CJSOI (nitranga in-1) : Hihaona voalohany ny ekipam-pirenana sokajy latsaky ny 16 taona niatrika ny Afrobasket U16 farany teo sy ny ekipam-pirenena sokajy latsaky ny 17 taona niatrika ny lalaon'ny CJSOI (Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien) tany Kaomôro, tamin'ny taona 2012. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
manitsakitsaka (nitranga in-1) : Mampirina ny kiraron'ny rainy, manitsakitsaka ny lamosiny, izany no setriny atolotr'ity sombin'ny ainy ilay ray niteraka azy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Dolin (nitranga in-2) : jeneraly Rasolosoa Dolin, filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita
Sahirana manao fampielezan-kevitra. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
Hanitry (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Rakotomahanina (nitranga in-1) : «Efa vonona amin'ny fandraisana fepetra momba izany izahay ary tsy handefitra mihitsy», araka ny fanamarihana nataon'ny kolonely Florens Rakotomahanina, lehiben'ny Cirgn eto Analamanga, omaly. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
nandaniana (nitranga in-1) : Ar 400 kosa dia efa mahavita ny lalana mety nandaniana Ar 700 na mihoatra teo aloha. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
miangavy (nitranga in-1) : miangavy ireo kandidà tsy afaka hiatrika ny fihodinana faharoa amin' ny fifidianana Filoham-pirenena mba hanaiky ny voka-pifidianana ofisialy havoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (Ffm). (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
nomontsany (nitranga in-1) : nomontsanin'ny Cnaps Sport ny Tana Formation tany Mahajanga
Naneho ny fahatezerany nanoloana ny faharesena tsy nampoizina teo anatrehan'ny Cnaps Sport Itasy, nandritra ny andro fahatelo ho an'ny “poule des AS”, tany Mahajanga, ny mpitantana ny Tana Formation FC. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
Nifanome (nitranga in-1) : Nifanome fotoana àry ireo iraky ny polisy sy ireo andian'olona ka teo no nahatratrarana azy ireo. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
Roland (nitranga in-1) : Noho ny fahavitsian'ireo mpikambana Cst niatrika ny fivoriana voalohany, tokony nandinihana ny raharaha mahakasika ny banky «Bni Madagascar» sy ny voalaza fa fanjavonana fiara manokana, mpitondra vola avy amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara ary ny fanoloana ny filoha lefitry ny Cst, Roland Ratsiraka, kandida filoham-pirenena no nahatonga io fanapahan-kevitra io. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
Jeunesse (nitranga in-1) : Hihaona voalohany ny ekipam-pirenana sokajy latsaky ny 16 taona niatrika ny Afrobasket U16 farany teo sy ny ekipam-pirenena sokajy latsaky ny 17 taona niatrika ny lalaon'ny CJSOI (Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien) tany Kaomôro, tamin'ny taona 2012. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
nandavoan' (nitranga in-1) : Isan'ireny ny teo amin'ny andro fahatelo ka nandavoan' izy ireo tamin'ny isa 3 no ho 0 ny Austria Vienne, tao amin'ny kianja Ernst Happel Stadion Vienna. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
hampisy (nitranga in-1) : Fiaraha-miasa eo amin'ny federasiona sy ny fahitalavitra Rta no hampisy ny “All stars gasy”, izay hahitana fampisehoana ataon' ireo kalaza eo amin'ity baolina volom-boasary ity. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Claude (nitranga in-1) : HIJERY IFOTONY
Ho avy hanara-maso sy hijery ifotony ny fizotry ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahina eto Madagasikara i Jean Claude de l'Estrac, sekretera jeneralin'ny vaomieran'ny Rano- masimbe Indianina. (Tapatapany)
Label (nitranga in-5) : tao anatin'ny fitadiavana ny kanto sy ny kalitao, teraka ihany ary nampaha -fantarina omaly ny raki-
tsary vaovaon'i Label, mpanakanto miangaly ny mozika mafana ampivadiana amin'ny mozika latino. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
Ramaroson (nitranga in-1) : “Fanomanana sahady ny fandraisana anjarantsika eo amin'ny Afrobasket U18 izany no hoentina ihany koa miomana amin'ny Lalaon'ny Nosy andiany fahasivy, any La Réunion amin'ny taona 2015”, hoy
i Jean Michel Ramaroson na i Mika, filohan'ny federasiona malagasin'ny basket ball. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
niarahan' (nitranga in-1) : Tsy lavitra ity toerana ity no nandonan'ny kamiao an'i Sylvie kely (sisiny havia)
Isan'ora ny fahatsiarovako azy… Efa ananan'ireo ray sy reniny fahatsiarovana maro be ity zanany ity na dia fotoana vitsy monja aza no niarahan'izy ireo taminy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Orange (nitranga in-2) : Noho ity faritra ity manana ny anjara toerany eo amin'ny lafiny toekarena sy mila ny serasera amin'ireo faritra hafa sy ny any ivelany, dia manome tolotra manokana ho an'ireo mpanjifa ny Orange Madagascar. (SERASERA-Mampiantrano hetsika ho an’ny “Internet” i Toamasina)
Sylvie (nitranga in-11) : Io hiram-pivavahana io no anisan'ny tena ankafizin-dRandrianarivelo Sylvie Laetitia, zazavavikely vao roa taona monja saingy nindaosin'ny fahafatesana tampoka ny alarobia 16 oktobra teo. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
hahitana (nitranga in-1) : Fiaraha-miasa eo amin'ny federasiona sy ny fahitalavitra Rta no hampisy ny “All stars gasy”, izay hahitana fampisehoana ataon' ireo kalaza eo amin'ity baolina volom-boasary ity. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Aline (nitranga in-1) : Efa ho 20 taona mahery izahay no nipetraka teto tsy nisy mihitsy ny fanamboarana raha tsy izao», hoy i Aline, mponina eny amin'iny faritra iny. (FOTODRAFITRASA-Nohavaozina ny lalan-kely eny Ambondrona-Ambodifilao)
Petersbourg (nitranga in-1) : Vokatra
nindaosy (nitranga in-1) : Io hiram-pivavahana io no anisan'ny tena ankafizin-dRandrianarivelo Sylvie Laetitia, zazavavikely vao roa taona monja saingy nindaosin'ny fahafatesana tampoka ny alarobia 16 oktobra teo. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Francis (nitranga in-1) : a
Ireo mandrafitra ny All Stars All Stars senior: Claudio (Ascum), Biana (Ascut), Rina (Ascut), Fataka (Ascut), Guy (Ascut), Saka (GNBC), Rado (Cosfa), Donné (Cospn), Jules (Cospn), Thierry (Fanatic), Danz (Sebam), Fidy (Sebam) All Stars espoir : Nasper (Ascum), Davi (Ascum), Zayad (Ascum), Anthony (Cosfa), Ibrahim (Sebam), Francis (GNBC), John (Sud-Ouest), Tanjona (Ascut), Lalason (Ascut), Fabrice (GNBC), Mamy Kely (Sebam), Borida (Cospn), Marc (Sebam). (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
afak' (nitranga in-3) : nanainga afak'omaly maraina tany Nosy-Be ireo mpitandro ny filaminana nitondra ireo olona 13, anisan' ireo voarohirohy tamin'ireny korontana niafara tamin'ny famonoana olona sy famo-tehana fananan'olona tamin' ny fiandohan'ny volana oktobra ireny. (FIANTSONANA TAKSY-Grenady tsy mety mipoaka natao fampitahorana)
nisehoan' (nitranga in-3) : Tamin'io fotoana io indrindra no nandalo ny fiara vaventy iray mpitondra fasika izay nandeha mafy, ka nifaoka azy», hoy ny fitantaran'ny rainy ny zava-nitranga tamin'ny fotoana nisehoan'ny loza. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
Ratsiraka (nitranga in-1) : Noho ny fahavitsian'ireo mpikambana Cst niatrika ny fivoriana voalohany, tokony nandinihana ny raharaha mahakasika ny banky «Bni Madagascar» sy ny voalaza fa fanjavonana fiara manokana, mpitondra vola avy amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara ary ny fanoloana ny filoha lefitry ny Cst, Roland Ratsiraka, kandida filoham-pirenena no nahatonga io fanapahan-kevitra io. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
Saziana (nitranga in-1) : Saziana amin'ny fitokonana tsy hanohizana ny asam-pitaterana ireo mponina sy mpanjifa satria moa an-dry zalahy ny fiara ka izay tiany hatao io. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
hoentina (nitranga in-2) : “Fanomanana sahady ny fandraisana anjarantsika eo amin'ny Afrobasket U18 izany no hoentina ihany koa miomana amin'ny Lalaon'ny Nosy andiany fahasivy, any La Réunion amin'ny taona 2015”, hoy
i Jean Michel Ramaroson na i Mika, filohan'ny federasiona malagasin'ny basket ball. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Hotontosaina (nitranga in-1) : Hotontosaina amin'ny sabotsy ho avy izao izany fifaninanana hoentin'ny federasiona malagasin'ny basket ball hanakatonana ny taom-pilalaovana 2013 izany. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Ekipa (nitranga in-1) : Ekipa avy amin'ny ligim-paritra Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Ihorombe ary Matsiatra Ambony no tokony hifanandrina tamin'izany. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
mampihisatra (nitranga in-1) : Filam-baniny
Raha ny filazan'ny Tahirim-bolam-panjakana dia ny fisian'ny tsy fihetezana amin'ireo taratasy atolotry ny kaompania amin'ny fampandoavana ireo faktiora no mampihisatra izany fandoavana izany. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
nahatafidiran' (nitranga in-1) : Ny FC Porto ihany no tsy nahatafidiran'izy ireo baolina 3 tamin'ireo mpiray vondrona tamin' izy ireo teo amin'ny lalao mandroso. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
tompondakan' (nitranga in-2) : fandresena avokoa hatramin'ny talata alina teo no azon'ny Atletico Madrid, izay mitarika vonjimaika eo amin'ny vondrona G, amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Eoropa ho an'ny baolina kitra. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Thierry (nitranga in-1) : a
Nitondra (nitranga in-1) : Nitondra fanazavana ny tranga toy izao ny manam-pahaizana momba ny toetra iray, Dr Andrianaivo Victorine. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
taksibe (nitranga in-2) : Niitatra tany amin'ireo toerana roa ireo ny lalan'ny taksibe ao anatin'ny kaoperativa Mirindra misy ny taksibe zotra 163. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
IFOTONY (nitranga in-1) : HIJERY IFOTONY
Raymonde (nitranga in-1) : Rehefa mahita an'i Masimbavy Anne dia miteny koa izy hoe »io ny beben'i Jesoa »», hoy ny fitantaran-dRanjamanana Agnès Raymonde, reniben'ilay zaza namoy ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
hivarotan' (nitranga in-1) : «Ny tena mahasarotiny anay dia ny hivarotan'ilay milaza ho tompony azy ity trano ity, izay tsy ara-dalàna akory ny nahazoany azy. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
hampidiran' (nitranga in-1) : «Nandrisika ireo ray sy reniny hatrany aho ny mba hampidiran'izy ireo azy hanao teatra any aoriana kely noho izy hita fa tena matsilo saina be no sady mora mandray zavatra», hoy ihany ilay renibe, nanao tamberina. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Cirgn (nitranga in-2) : «Efa vonona amin'ny fandraisana fepetra momba izany izahay ary tsy handefitra mihitsy», araka ny fanamarihana nataon'ny kolonely Florens Rakotomahanina, lehiben'ny Cirgn eto Analamanga, omaly. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
lefitry (nitranga in-2) : «Tsy ekenay ny fanitsa-kitsahana ny zonay sy fibodoana tsotra izao ny fanananay, noho izany, tsy hifidy izahay sy ny fiana-kavianay, izay miisa 6 000», hoy Andrianasoa Mamy, filoha lefitry ny mpivarotra solomaso etsy Andravo-ahangy. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
Alasora (nitranga in-1) : Tranga iray vao niseho farany teo ny tamin'iny kaominina Ambohiman-gakely sy Alasora ao anatin'ny distrikan'Avaradrano iny. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Gsis (nitranga in-2) : Noho ireo antony ireo dia natao tsara ambina tanteraka ny eny Mahazoarivo, ka ireo zandary voaofana manokana avy amin'ny Gsis no isan' ireo maro an'isa miambina ny lapa. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
Nifanenjika (nitranga in-1) : Nifanenjika izy roa kely ka i Sylvie no nihazakazaka mafy tany amin'ny arabe fa ilay havany kosa natahotra ka tsy nandeha. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
distrika (nitranga in-2) : tsy hiandry ela fa amin'ity faran'ny herinandro ity ihany dia efa ho fantatra amin'ny ampahany betsaka ireo voka-pifidianana eo anivon'ireo distrika amin'ireo tanàn-dehibe manerana an'i Madagasikara. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
Bucarest (nitranga in-1) : Vokatra
sports (nitranga in-1) : Hihaona voalohany ny ekipam-pirenana sokajy latsaky ny 16 taona niatrika ny Afrobasket U16 farany teo sy ny ekipam-pirenena sokajy latsaky ny 17 taona niatrika ny lalaon'ny CJSOI (Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien) tany Kaomôro, tamin'ny taona 2012. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
mahasarotiny (nitranga in-1) : «Ny tena mahasarotiny anay dia ny hivarotan'ilay milaza ho tompony azy ity trano ity, izay tsy ara-dalàna akory ny nahazoany azy. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
Andrianasoa (nitranga in-1) : «Tsy ekenay ny fanitsa-kitsahana ny zonay sy fibodoana tsotra izao ny fanananay, noho izany, tsy hifidy izahay sy ny fiana-kavianay, izay miisa 6 000», hoy Andrianasoa Mamy, filoha lefitry ny mpivarotra solomaso etsy Andravo-ahangy. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
hotanterahina (nitranga in-1) : HIJERY IFOTONY
mora (nitranga in-2) : Tsy hanaiky mora fotsiny izahay fa hametraka fitoriana any amin'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra sady hanokatra fanadihadiana mikasika izany”, hoy i Hery Rasoamaromaka na i Hery Be, filohan'ny Tana Formation FC. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Nanamarika (nitranga in-1) : Nanamarika anefa ireo mpikambana sasany ao anatin'ny Vondron'ireo mpandraharaha solika (Gpm) fa toy ny filam-baniny ihany ny pitsopitsony itondran'ny Tahirim-bolam-panjakana fanakianana amin'ireo Ccal. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
irony (nitranga in-2) : Roa lahy izy ireo no mpamily, irony fiara mpitatitra olona marika TATA irony, mampitohy an'Anta-nanarivo sy Taolagnaro. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
nanaovan' (nitranga in-1) : Araka ny fanambaràna nataon'izy ireo omaly dia mba hisorohana ny mety hisian'ny fanakorontana aorian'ny fanambaràna ny voka-pifidianana ofisialy no antony nanaovan'ny Ffm io fangatahana io. (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
Olga (nitranga in-1) : Raha nanontaniana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny Cua, Rasamimanana Olga, dia nanambara izy fa ara-dalàna ny fangatahana nataon'ny fikambanana nanorina ny trano. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
hisolo (nitranga in-1) : Andrasana ny fanapahan-kevitry ny federasiona eo amin'ny fanendrena ireo ekipa hisolo tena ny faritra atsimo amin'ny dingan' ny famaranana lehibe hotontosaina eto Antananarivo, amin'ny 4 – 10 novambra. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
Voadonan' (nitranga in-1) : Voadonan'ny kamiao teny Anjomakely, akaikin'ny kaominina ity zaza ity, raha izy nilalao iny. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
tampo (nitranga in-1) : Variana nitaiza ilay zandriny ilay renibeny fa izy kosa nilalao niaraka tamin'ny zanaky ny mpiray tampo aminy tao ambadiky ny trano. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nampandre (nitranga in-2) : Tamin'ny zoma 11 oktobra dia nisy olona tsara sitrapo nanatona ny polisy ary nilaza fa misy olona telo lahy tao amin'ny trano fisotroana iray ao an-toerana nilaza fa mitady mpividy taolam-paty ary nampandre azy ireo raha liana tamin'izany. (FIANTSONANA TAKSY-Grenady tsy mety mipoaka natao fampitahorana)
Melody (nitranga in-1) : Torak'izany koa ny «Avy mangataka izahay» izay atao kosa indray eny amin'ny SK Melody Mandriambero ny 08 novambra izao. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
nahafantarana (nitranga in-1) : loharanom-baovao marim-pototra no nahafantarana fa arovana mafy ny lapan' ny Praiminisitra eny Mahazoarivo, nanomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
hanakatonana (nitranga in-1) : Hotontosaina amin'ny sabotsy ho avy izao izany fifaninanana hoentin'ny federasiona malagasin'ny basket ball hanakatonana ny taom-pilalaovana 2013 izany. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
hahafahana (nitranga in-1) : Mangataka ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra anefa izahay mba hahafahana mifehy izany», hoy izy. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
hisamborana (nitranga in-1) : Raikitra ny vela-pandrika napetraky ny polisy mba hisamborana ireto ahiahiana ho mpamaky fasana ireto. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
hotontosaina (nitranga in-1) : Andrasana ny fanapahan-kevitry ny federasiona eo amin'ny fanendrena ireo ekipa hisolo tena ny faritra atsimo amin'ny dingan' ny famaranana lehibe hotontosaina eto Antananarivo, amin'ny 4 – 10 novambra. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
ampivadiana (nitranga in-1) : tao anatin'ny fitadiavana ny kanto sy ny kalitao, teraka ihany ary nampaha -fantarina omaly ny raki-
sanganasan' (nitranga in-1) : Ankoatra ireo hiran'ny tarika Label, fanomezana atolotr'izy ireo ny mpankafy ao anatin'ity rakitsary ity ny hira faha-10 «Jao lehilahy» sanganasan'
i Janga Ratah Faly Ran. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
mi­tsena (nitranga in-1) : Rehefa tonga avy miasa indray kosa ny hariva, dia efa izy indray no voalaza fa mihazakazaka voalohany mi­tsena an-drainy sady manontany hoe: «inona no nentin'ny dada ho ahy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Stadion (nitranga in-1) : Isan'ireny ny teo amin'ny andro fahatelo ka nandavoan' izy ireo tamin'ny isa 3 no ho 0 ny Austria Vienne, tao amin'ny kianja Ernst Happel Stadion Vienna. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
toromarika (nitranga in-2) : Nomena toromarika ilay olona tsara sitrapo ny handresy lahatra azy ireo fa mahita mpividy taolam-paty. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
keloka (nitranga in-2) : tANTARA MITOHY
Antontan-taratasy fangatahana famotsoran- keloka miisa 30 indray no nalefan'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy eo anivon'ny Vaomiera manokana misahana ny fisokajiana ireo olona tokony hisitraka ny famotsoran-keloka eo anivon'ny Fitsarana Tampony. (Tapatapany)
Andrianjanaka (nitranga in-1) : Soratra : Naka Andrianjanaka
Sary : Sergio Maryl. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Glasgow (nitranga in-1) : Vokatra
mampitaky (nitranga in-1) : Ankoatra izay, ny fahara-tsian'ny fiainana amin'izao, izay mampitaky fitiavana sy tambitamby, ka mety any amin'izany filàna izany no anehoan'ny raim-pianakaviana izany. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
fanambaràna (nitranga in-2) : Araka ny fanambaràna nataon'izy ireo omaly dia mba hisorohana ny mety hisian'ny fanakorontana aorian'ny fanambaràna ny voka-pifidianana ofisialy no antony nanaovan'ny Ffm io fangatahana io. (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
Antsirabe (nitranga in-1) : isan'ireo mpilalao nifampizara ilay tontona Ar 10 tapitrisa tamin'ny fahitana ny efatra tamin'ireo laharana dimy nosarihina tamin'ny lalao vintana «Peo ny dimy», ny zoma lasa teo i Hervé, raim-pianakaviana avy any Antsirabe. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
viana (nitranga in-1) : Zazalahy voatifitra > Nisy jiolahy nanafika ny fianaka- viana iray tao Ambolivato, distrikan'i Fenoarivo Atsinanana, ny 21 oktobra teo tamin'ny 11 ora sy sasany alina. (Sombiny)
Canitrot (nitranga in-3) : Efa tonga ary niara-dia amin'izy ireo any an-toerana ilay teratany Frantsay, Philippe Canitrot, hanampy an'i Berthin Zoto amin'ny fitantanana ny ekipam-pirenena malagasy amin'io fifaninanana io. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Rasamimanana (nitranga in-1) : Raha nanontaniana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny Cua, Rasamimanana Olga, dia nanambara izy fa ara-dalàna ny fangatahana nataon'ny fikambanana nanorina ny trano. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
naratra (nitranga in-1) : Avotra ihany anefa izy saingy naratra mafy. (Sombiny)
hifanandrina (nitranga in-1) : Ekipa avy amin'ny ligim-paritra Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Ihorombe ary Matsiatra Ambony no tokony hifanandrina tamin'izany. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
nandinihana (nitranga in-2) : Noho ny fahavitsian'ireo mpikambana Cst niatrika ny fivoriana voalohany, tokony nandinihana ny raharaha mahakasika ny banky «Bni Madagascar» sy ny voalaza fa fanjavonana fiara manokana, mpitondra vola avy amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara ary ny fanoloana ny filoha lefitry ny Cst, Roland Ratsiraka, kandida filoham-pirenena no nahatonga io fanapahan-kevitra io. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
nitaky (nitranga in-1) : Manantena ny hisian' ny fitoniana ihany koa ny Ffm ary nitaky ny handraisan'ireo manam-pahefana rehetra ny andraikitra mifanandrify amin'izy ireo avy. (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
Pologne (nitranga in-1) : Nanainga omaly hihazo an'i Sri Lanka izy ireo hiatrika ny lalao telozoro hifanandrinany amin'i Sri Lanka (26 oktobra) sy Pologne (30 oktobra) hoentina manomana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika vondrona A, hatao eto amintsika amin'ny taona ho avy. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Mahazoarivo (nitranga in-4) : loharanom-baovao marim-pototra no nahafantarana fa arovana mafy ny lapan' ny Praiminisitra eny Mahazoarivo, nanomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
tafaporitsaka (nitranga in-1) : Ny iray ihany no tratra fa ny dimy kosa tafaporitsaka ary mbola eo am-pikarohana azy ireo ny polisy any an-toerana. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
Makis (nitranga in-3) : niainga omaly ho any Sri Lanka ireo mpilalaon'ny Makis
Tsy isan'ireo hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 25 oktobra ireo mpilalao 24 mirahalahy miaraka amin' ny mpanazatra sy mpanotra ary ny filohan'ny federasiona malagasin'ny baolina lavalava. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
noraisina (nitranga in-1) : «50 monja ary tsy nahatratra ny antsasa-manila ireo mpikambana niatrika ny fivoriana ka tsy nisy ny fanapahan-kevitra azo noraisina mahakasika ireo raharaha ireo. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
basket (nitranga in-3) : taorian'ny fifaninanam-pirenena ho an'ny basket ball sokajy N1A, tamin'ny faran'ny herinandro teo, dia fety mitohy ny an'ity taranja ity eny amin'ny lapan' ny Fanatanjahantena Mahamasina. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Victorine (nitranga in-1) : Nitondra fanazavana ny tranga toy izao ny manam-pahaizana momba ny toetra iray, Dr Andrianaivo Victorine. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
pifidianana (nitranga in-1) : «Halefa amin'ireo tranonkalam-pifandraisan'ny Cenit foibe eto Antananarivo ireo fitanana an-tsoratra ny voka- pifidianana eo anivon'ireo distrika ireo ary ezahina araka izay tratra ny hanafaingana ny famoahana ny voka-pifidianana rehetra», araka ny fanazavan'ny mpampaka-tenin'ny Cenit, Fano Rakotondrazaka, omaly. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
Kaomôro (nitranga in-1) : Hihaona voalohany ny ekipam-pirenana sokajy latsaky ny 16 taona niatrika ny Afrobasket U16 farany teo sy ny ekipam-pirenena sokajy latsaky ny 17 taona niatrika ny lalaon'ny CJSOI (Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien) tany Kaomôro, tamin'ny taona 2012. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
teatra (nitranga in-1) : «Nandrisika ireo ray sy reniny hatrany aho ny mba hampidiran'izy ireo azy hanao teatra any aoriana kely noho izy hita fa tena matsilo saina be no sady mora mandray zavatra», hoy ihany ilay renibe, nanao tamberina. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Jules (nitranga in-1) : a
hiandry (nitranga in-1) : tsy hiandry ela fa amin'ity faran'ny herinandro ity ihany dia efa ho fantatra amin'ny ampahany betsaka ireo voka-pifidianana eo anivon'ireo distrika amin'ireo tanàn-dehibe manerana an'i Madagasikara. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
Rajaonarisamba (nitranga in-1) : Faharesena tamin'ny isa 3 no ho 0 no nanjo ity ekipan'i Frank Rajaonarisamba sy Pierrot Rakotomanga ity. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
niasa (nitranga in-1) : Efa herinandro vitsy izay no niasa andro aman' alina manao fisafoana tamin'ireo renivohi-paritany rehetra manerana ny Nosy ireo mpitandro ny filaminana eo anivon' ny Emmo-Nat. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
Hanorana (nitranga in-2) : Hanorana malefaka kosa any amin'ny faritra Atsinanana. (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
nitarafan' (nitranga in-1) : Omaly maraina no niatrika lalao tsapa farany 20 minitra indroa miditra izy ireo ka nitarafan'i Philippe Canitrot izay tetikady hampiasaina any Sri Lanka. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Ccal (nitranga in-5) : Nanamarika anefa ireo mpikambana sasany ao anatin'ny Vondron'ireo mpandraharaha solika (Gpm) fa toy ny filam-baniny ihany ny pitsopitsony itondran'ny Tahirim-bolam-panjakana fanakianana amin'ireo Ccal. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Nanana (nitranga in-1) : Nanana kavina volamena i Sylvie izay tsy noesorin'ny ray aman-dreniny mihitsy raha tsy tapa-bolana nialoha ny nandaozany ny tany. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Raharinosy (nitranga in-1) : Ny vahoaka ihany koa anefa dia afaka mandray anjara amin' ny fanamboarana», hoy Monique Raharinosy, lehiben'ny tetikasa 3P. (FOTODRAFITRASA-Nohavaozina ny lalan-kely eny Ambondrona-Ambodifilao)
anatrehan' (nitranga in-1) : nomontsanin'ny Cnaps Sport ny Tana Formation tany Mahajanga
2011 (nitranga in-1) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
2013 (nitranga in-3) : Hotontosaina amin'ny sabotsy ho avy izao izany fifaninanana hoentin'ny federasiona malagasin'ny basket ball hanakatonana ny taom-pilalaovana 2013 izany. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
2012 (nitranga in-1) : Hihaona voalohany ny ekipam-pirenana sokajy latsaky ny 16 taona niatrika ny Afrobasket U16 farany teo sy ny ekipam-pirenena sokajy latsaky ny 17 taona niatrika ny lalaon'ny CJSOI (Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien) tany Kaomôro, tamin'ny taona 2012. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Porto (nitranga in-2) : Ny FC Porto ihany no tsy nahatafidiran'izy ireo baolina 3 tamin'ireo mpiray vondrona tamin' izy ireo teo amin'ny lalao mandroso. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
Celtic (nitranga in-1) : Vokatra
Senior (nitranga in-1) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Marseille (nitranga in-1) : Vokatra
vitany (nitranga in-1) : Kilometatra an'arivony no vitany vao nahavita ny rakitsary ahitana hira sivy. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
azon' (nitranga in-1) : fandresena avokoa hatramin'ny talata alina teo no azon'ny Atletico Madrid, izay mitarika vonjimaika eo amin'ny vondrona G, amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Eoropa ho an'ny baolina kitra. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
Laetitia (nitranga in-1) : Io hiram-pivavahana io no anisan'ny tena ankafizin-dRandrianarivelo Sylvie Laetitia, zazavavikely vao roa taona monja saingy nindaosin'ny fahafatesana tampoka ny alarobia 16 oktobra teo. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
hijanonako (nitranga in-1) : Aorian'io dia mbola hifampiresaka amin'ny federasiona aho amin'ny mety hijanonako eto, izay efa nambarako matetika ny fahavononako”, hoy i Philippe Canitrot, izay nitondra an'i Zimbaboe nanilika an'i Madagasikara teo amin' ny manasa-dalan'ny Can 2013 vondrona A. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Borida (nitranga in-1) : a
Milan (nitranga in-1) : Vokatra
Vondron' (nitranga in-1) : Nanamarika anefa ireo mpikambana sasany ao anatin'ny Vondron'ireo mpandraharaha solika (Gpm) fa toy ny filam-baniny ihany ny pitsopitsony itondran'ny Tahirim-bolam-panjakana fanakianana amin'ireo Ccal. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
pitsopitsony (nitranga in-1) : Nanamarika anefa ireo mpikambana sasany ao anatin'ny Vondron'ireo mpandraharaha solika (Gpm) fa toy ny filam-baniny ihany ny pitsopitsony itondran'ny Tahirim-bolam-panjakana fanakianana amin'ireo Ccal. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Sport (nitranga in-3) : nomontsanin'ny Cnaps Sport ny Tana Formation tany Mahajanga
Agnès (nitranga in-2) : Rehefa mahita an'i Masimbavy Anne dia miteny koa izy hoe »io ny beben'i Jesoa »», hoy ny fitantaran-dRanjamanana Agnès Raymonde, reniben'ilay zaza namoy ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Zaidou (nitranga in-1) : «Voaro-hirohy amin'ny famonoana sy fandorana an'i Zaidou, ilay teratany Malagasy, indray kosa ireo enina ambiny. (FIKOMIANA TANY NOSY-BE-Niampy 13 indray ireo hatolotra ny Fampanoavana eto Antananarivo)
Dortmund (nitranga in-1) : Vokatra
nahavita (nitranga in-3) : Nandositra ilay voalaza fa mpamitaka rehefa avy nahavita ny fikasany. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
nanesorana (nitranga in-1) : Handeha hiakatra aty an-drenivohitra ny ray sy reniny ka ny tahotra ny mpanendaka no nanesorana ilay kavina izay tsy voapetaka intsony. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nirahy (nitranga in-1) : Raha mbola tsy vita izany dia nirahin'ity mpamily iray voalohany io lehilahy niha-ram-boina io mba hijery ny tsindry hisatra tao ambany ny fiara, izay voalaza fa nisy olana teknika, araka ny fitantaran'ireo nanatri-maso. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
nitondra (nitranga in-4) : Efa nihodidina ilay toerana namandrihana azy ireo ny mpitandro ny filaminana ka noraisim-potsiny ny iray, izay efa nitondra gony feno taolam-paty. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
tondroiny (nitranga in-1) : Tsaroako tsara izahay rehefa mandeha mivavaka any am-piangonana dia tondroiny ny sarin'i Masina Maria sady miteny izy hoe io ny maman'i Jesoa. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nampoizina (nitranga in-1) : nomontsanin'ny Cnaps Sport ny Tana Formation tany Mahajanga
Morondava (nitranga in-1) : Faritra maro, niainga tany Morondava ka hatrany Nosy-Be, Toamasina… no notetezina
Tafiditra amin'ny hetsika fampahafantarana ny vokatra ny «manala azy vita fifidianana» hatolotry ny tarika Label, eny amin'ny Jao's Pub eny Ambohipo, ny zoma 25 oktobra izao. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
Formation (nitranga in-4) : nomontsanin'ny Cnaps Sport ny Tana Formation tany Mahajanga
Toetry (nitranga in-2) : Toetry ny andro > Azo antenaina ny tsy hisian'ny orana eto amin'ny faritra Analamanga mandritra ny fifidianana amin'ny Zoma izao. (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
tenany (nitranga in-2) : Tonga naka ny lokany tetsy amin'ny foiben'ny Reelmada, Andraharo ny tenany. (Tapatapany)
Atletico (nitranga in-2) : fandresena avokoa hatramin'ny talata alina teo no azon'ny Atletico Madrid, izay mitarika vonjimaika eo amin'ny vondrona G, amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Eoropa ho an'ny baolina kitra. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
dingan' (nitranga in-1) : Andrasana ny fanapahan-kevitry ny federasiona eo amin'ny fanendrena ireo ekipa hisolo tena ny faritra atsimo amin'ny dingan' ny famaranana lehibe hotontosaina eto Antananarivo, amin'ny 4 – 10 novambra. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
Zenit (nitranga in-1) : Vokatra
nahita (nitranga in-5) : Olona sendra nandalo no nahita ity zazalahy ka
nitondra azy avy hatrany tany amin'ny hopitaly. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
Juliano (nitranga in-1) : Juliano Randrianja
Tahirin-tsarina mpitandro filaminana manao fiambenana ny lapan'i Mahazoarivo. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
Madrid (nitranga in-2) : fandresena avokoa hatramin'ny talata alina teo no azon'ny Atletico Madrid, izay mitarika vonjimaika eo amin'ny vondrona G, amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Eoropa ho an'ny baolina kitra. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
tanàna (nitranga in-1) : Miitatra anie ny tanàna. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Arsenal (nitranga in-1) : Vokatra
Cenit (nitranga in-3) : «Halefa amin'ireo tranonkalam-pifandraisan'ny Cenit foibe eto Antananarivo ireo fitanana an-tsoratra ny voka- pifidianana eo anivon'ireo distrika ireo ary ezahina araka izay tratra ny hanafaingana ny famoahana ny voka-pifidianana rehetra», araka ny fanazavan'ny mpampaka-tenin'ny Cenit, Fano Rakotondrazaka, omaly. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
horaisiny (nitranga in-1) : Raha mahalala sy mahafehy ny andraikitra tokony horaisiny mantsy ny tsirai-ray eo anivon'ny tokan-trano iray dia tsy tokony ho tonga amin'izao fihetsika mamoafady izao. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
hanokatra (nitranga in-1) : Tsy hanaiky mora fotsiny izahay fa hametraka fitoriana any amin'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra sady hanokatra fanadihadiana mikasika izany”, hoy i Hery Rasoamaromaka na i Hery Be, filohan'ny Tana Formation FC. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
ambadiky (nitranga in-1) : Variana nitaiza ilay zandriny ilay renibeny fa izy kosa nilalao niaraka tamin'ny zanaky ny mpiray tampo aminy tao ambadiky ny trano. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Stars (nitranga in-5) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
fombafomba (nitranga in-1) : Nanebaka ny fombafomba fanaon'ireo tobin-dasantsy sasany ny Tahirim-bolam-panjakana. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Schalke (nitranga in-1) : Vokatra
Anthony (nitranga in-1) : a
tato (nitranga in-1) : Tsindrimandry
«Asa na fifandrifian-javatra fa tato ho ato dia nilaza tamiko foana ilay zanako hoe: »Ndao isika Dada ho any amin'i Jesoa a. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
ekenay (nitranga in-1) : «Tsy ekenay ny fanitsa-kitsahana ny zonay sy fibodoana tsotra izao ny fanananay, noho izany, tsy hifidy izahay sy ny fiana-kavianay, izay miisa 6 000», hoy Andrianasoa Mamy, filoha lefitry ny mpivarotra solomaso etsy Andravo-ahangy. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
hampiasaina (nitranga in-2) : Omaly maraina no niatrika lalao tsapa farany 20 minitra indroa miditra izy ireo ka nitarafan'i Philippe Canitrot izay tetikady hampiasaina any Sri Lanka. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
nandroso (nitranga in-2) : Raha handeha hijery ny tsindry hisatra tao ambanin' ilay fiara vaventy noentiny ny mpamily iray no nandroso tampoka ny fiara ka notetezin'ireo kodiarana avy hatrany ny tapany am-boniny rehetra. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
Ampasambazaha (nitranga in-1) : nahitana grenady teo amin'ny toerana fiantsonan'ny fiarakaretsaka tao Ampasambazaha, Fianar-antsoa, afak'omaly, tokony ho tamin'ny 5 ora hariva. (FIANTSONANA TAKSY-Grenady tsy mety mipoaka natao fampitahorana)
Mpampakateny (nitranga in-1) : JR
Fano Rakotondrazaka, Mpampakateny eo anivon'ny Cenit. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
hisorohana (nitranga in-3) : Araka ny fanambaràna nataon'izy ireo omaly dia mba hisorohana ny mety hisian'ny fanakorontana aorian'ny fanambaràna ny voka-pifidianana ofisialy no antony nanaovan'ny Ffm io fangatahana io. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
vonton' (nitranga in-1) : Hoy aho tamin'izany hoe tsy ataoko mandre ny hirifirim-piainana izy, na hamoizako ny aiko aza izany», hoy ihany ilay raim-pianakaviana vonton'alahelo. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nahazoana (nitranga in-1) : Ankoatra izay dia nisy ihany koa famelezana totohondry an-kitsirano nataona mpilalao iray avy eo amin'ity mpifanandrina amin'izy ireo ity an'i Lanto teo imason'ny mpitsara saingy tsy nahazoana karatra mena fa nijanona ho mavo. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
zanany (nitranga in-6) : Tsy lavitra ity toerana ity no nandonan'ny kamiao an'i Sylvie kely (sisiny havia)
Isan'ora ny fahatsiarovako azy… Efa ananan'ireo ray sy reniny fahatsiarovana maro be ity zanany ity na dia fotoana vitsy monja aza no niarahan'izy ireo taminy. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
nandrafitra (nitranga in-1) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
vavitokana (nitranga in-1) : Ranjamanana Agnès, reniben'i Sylvie
Vavy tokana Akaiky ny fon'ny rainy kokoa i Sylvie amin'ny maha vavitokana azy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
fifanintsanana (nitranga in-1) : tsy hisy indray ny fifanintsanana any amin'ny faritra atsimon' ny Nosy eo amin'ny handball raha efa samy nahavita ny anjarany ny tany Avaratra sy ny teto Afovoan-tany. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
ananan' (nitranga in-1) : Tsy lavitra ity toerana ity no nandonan'ny kamiao an'i Sylvie kely (sisiny havia)
hatolotry (nitranga in-1) : Faritra maro, niainga tany Morondava ka hatrany Nosy-Be, Toamasina… no notetezina
alay (nitranga in-1) : mihoa-pampana ny solika alain'ireo fiaram-panjakana sasany
Tafakatra Ar 18 000 tapitrisa ny teti-bidin' ny taratasin-tsolika (Ccal) mbola tsy voaloan'ny Tahirim-bolam-panjakana amin'ireo kaompanian-tsolika hatramin' ny faran'ny volana septambra 2013 lasa teo. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
hifampiresaka (nitranga in-1) : Aorian'io dia mbola hifampiresaka amin'ny federasiona aho amin'ny mety hijanonako eto, izay efa nambarako matetika ny fahavononako”, hoy i Philippe Canitrot, izay nitondra an'i Zimbaboe nanilika an'i Madagasikara teo amin' ny manasa-dalan'ny Can 2013 vondrona A. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
lokona (nitranga in-1) : Na lokona penina tsy mitovy ampiasaina aza anefa dia kianina», hoy ny tao amin'ny Gpm. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Fenoarivo (nitranga in-1) : Zazalahy voatifitra > Nisy jiolahy nanafika ny fianaka- viana iray tao Ambolivato, distrikan'i Fenoarivo Atsinanana, ny 21 oktobra teo tamin'ny 11 ora sy sasany alina. (Sombiny)
Vakinankaratra (nitranga in-2) : Toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Menabe, Boeny, Matsiatra Ambony. (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
Analakely (nitranga in-1) : «Anisan'ny tanjon'ny tarika Label ny fanehoana ny hakanton'i Gasikara sy ny Malagasy ao anatin' ireo rindran-tsary ireo, ka nahatonga anay hitety faritra maro nanao ny fandraisana ny sary», araka ny fanazavan'i Label, raha nampaha- fantatra ity vokatra ity, omaly tetsy amin'ny «3 styles» Analakely. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
Ankadikely (nitranga in-1) : Mivelatra tsinona ny safidy sady ho afa-pahasahiranana raha mba hiampita amin'iny faritra Ankerana-Analamahitsy-Ambohitrarahaba hatreny Ankadikely sy Ilafy iny. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
nahazoan' (nitranga in-1) : Lalao nampiakarana ny tontona ho Ar 15 tapitrisa ho an'ireo mahita laharana dimy sy Ar 10 tapitrisa ho an'ireo nahita laharana efatra nandritra ny fisarihana ny zoma lasa teo no nahazoan'ireo mpilalao maro hafa. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
Rasolosoa (nitranga in-2) : jeneraly Rasolosoa Dolin, filohan'ny Filankevitra ambonin'ny tetezamita
telozoro (nitranga in-2) : Nanainga omaly hihazo an'i Sri Lanka izy ireo hiatrika ny lalao telozoro hifanandrinany amin'i Sri Lanka (26 oktobra) sy Pologne (30 oktobra) hoentina manomana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika vondrona A, hatao eto amintsika amin'ny taona ho avy. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
tenako (nitranga in-1) : Telo herinandro aloha no hijanona ho an'i Madagasikara ny tenako. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Pierrot (nitranga in-1) : Faharesena tamin'ny isa 3 no ho 0 no nanjo ity ekipan'i Frank Rajaonarisamba sy Pierrot Rakotomanga ity. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
Androndrakely (nitranga in-2) : teny Androndrakely no nisehoan'ny loza nahafaty mpamily
Ny alin'ny 22 oktobra lasa teo, tokony ho tamin' ny 7 ora no nitranga ny lozam-pifamoivoizana, teny amin'ny tobin-dasantsy iray, teny Androndrakely. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
Naples (nitranga in-1) : Vokatra
Jesoa (nitranga in-3) : Tsindrimandry
tale (nitranga in-1) : Mitombo ny olona, nefa toa mipetra-potsiny eo ambony sezam-birao ny minisitra sy ny tale isan-tsokajiny. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Réunion (nitranga in-1) : “Fanomanana sahady ny fandraisana anjarantsika eo amin'ny Afrobasket U18 izany no hoentina ihany koa miomana amin'ny Lalaon'ny Nosy andiany fahasivy, any La Réunion amin'ny taona 2015”, hoy
rahina (nitranga in-2) : Miisa 700 amin' izao fotoana ny mpiasan'ny Cnaps, ka ny 80%-n'ireo no mandray anjara amin'ity fanadinana ity, izay hotante- rahina ny 7 desambra izao. (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
ezaky (nitranga in-1) : Noho ny ezaky ny tetikasam-piaraha-miasan'ny fanja- kana sy ny tsy miankina (tetikasa 3P), eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua), dia vita ny fana-vaozana ity lalan-kely ity sy ny tata-dranony, izay mirefy 87 m. (FOTODRAFITRASA-Nohavaozina ny lalan-kely eny Ambondrona-Ambodifilao)
iarahako (nitranga in-1) : Tsy mety afaka an-tsaiko ny hafaliany rehefa mahita lamasinina», hoy hatrany Randrianarivelo Henintsoa Elie, rainy
«Tsy mbola nanana fikasana aho ny amin'izay hataony rahatrizay fa ny hany masaka tao an-dohako dia ny hankamamy ny minitra rehetra izay iarahako aminy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Andrianajanaka (nitranga in-1) : Naka Andrianajanaka. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
misolo (nitranga in-1) : Rehefa tarihiny mandeha mamonjy ny reniny any am-pivarotana aho, na dia akaiky aza ilay toerana, dia tsy manaiky izy raha tsy misolo akanjo ary izy ihany no misafidy izany», hoy indray ny rainy nanao tsiahy ny fotoana niarahany tamin'ilay menaky ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Rakotondrazaka (nitranga in-2) : «Halefa amin'ireo tranonkalam-pifandraisan'ny Cenit foibe eto Antananarivo ireo fitanana an-tsoratra ny voka- pifidianana eo anivon'ireo distrika ireo ary ezahina araka izay tratra ny hanafaingana ny famoahana ny voka-pifidianana rehetra», araka ny fanazavan'ny mpampaka-tenin'ny Cenit, Fano Rakotondrazaka, omaly. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
latino (nitranga in-1) : tao anatin'ny fitadiavana ny kanto sy ny kalitao, teraka ihany ary nampaha -fantarina omaly ny raki-
Hihaona (nitranga in-1) : Hihaona voalohany ny ekipam-pirenana sokajy latsaky ny 16 taona niatrika ny Afrobasket U16 farany teo sy ny ekipam-pirenena sokajy latsaky ny 17 taona niatrika ny lalaon'ny CJSOI (Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien) tany Kaomôro, tamin'ny taona 2012. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
tetikady (nitranga in-1) : Omaly maraina no niatrika lalao tsapa farany 20 minitra indroa miditra izy ireo ka nitarafan'i Philippe Canitrot izay tetikady hampiasaina any Sri Lanka. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
nivadihan' (nitranga in-1) : Nivadihan'ny namany > Teratany Frantsay iray no nivadihan'ny namany, izay mpanamboatra ny fiarany ihany, tao Manambondro, distrikan'i Vangaindrano, ny 20 oktobra teo, tamin' ny 10 ora alina. (Sombiny)
napetraky (nitranga in-1) : Raikitra ny vela-pandrika napetraky ny polisy mba hisamborana ireto ahiahiana ho mpamaky fasana ireto. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
Ernst (nitranga in-1) : Isan'ireny ny teo amin'ny andro fahatelo ka nandavoan' izy ireo tamin'ny isa 3 no ho 0 ny Austria Vienne, tao amin'ny kianja Ernst Happel Stadion Vienna. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
fampisamborana (nitranga in-1) : Nisy efa namoahan'ny Fitsarana tao Antananarivo didy fampisamborana ny iray amin' izy ireo», hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimaria. (FIKOMIANA TANY NOSY-BE-Niampy 13 indray ireo hatolotra ny Fampanoavana eto Antananarivo)
hoenty (nitranga in-1) : Hotontosaina amin'ny sabotsy ho avy izao izany fifaninanana hoentin'ny federasiona malagasin'ny basket ball hanakatonana ny taom-pilalaovana 2013 izany. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Steaua (nitranga in-1) : Vokatra
Lojika (nitranga in-1) : Lojika izany. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
lamasinina (nitranga in-1) : «Isan'ora ny fahatsiarovako azy, indrindra rehefa mijery lamasinina mandalo iny tahaka ny fanaonay mianaka. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
pahaizana (nitranga in-1) : Noho ny tonga teny amin'ilay fiantsonana ireo polisy dia niantso avy hatrany ireo zandary manam- pahaizana manokana momba ny fikirakirana fita- ovam-piadiana mipoaka. (FIANTSONANA TAKSY-Grenady tsy mety mipoaka natao fampitahorana)
zanako (nitranga in-1) : Tsindrimandry
nandaozany (nitranga in-1) : Nanana kavina volamena i Sylvie izay tsy noesorin'ny ray aman-dreniny mihitsy raha tsy tapa-bolana nialoha ny nandaozany ny tany. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
espoir (nitranga in-2) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Zayad (nitranga in-1) : a
hijery (nitranga in-3) : HIJERY IFOTONY
Ho avy hanara-maso sy hijery ifotony ny fizotry ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahina eto Madagasikara i Jean Claude de l'Estrac, sekretera jeneralin'ny vaomieran'ny Rano- masimbe Indianina. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
Anne (nitranga in-1) : Rehefa mahita an'i Masimbavy Anne dia miteny koa izy hoe »io ny beben'i Jesoa »», hoy ny fitantaran-dRanjamanana Agnès Raymonde, reniben'ilay zaza namoy ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
ahafahana (nitranga in-2) : «Ny fividianana io vokatra io no bileta tokana ahafahana miatrika ny fampisehoana», hoy ihany izy somary nanao vazivazy. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
nijoro (nitranga in-1) : “Raha ny filazan'ireo
mpilalao sahy nijoro vavolombelona dia nisy mpilalao iray nivarotra lalao tamin'io fotoana io. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
Hervé (nitranga in-1) : isan'ireo mpilalao nifampizara ilay tontona Ar 10 tapitrisa tamin'ny fahitana ny efatra tamin'ireo laharana dimy nosarihina tamin'ny lalao vintana «Peo ny dimy», ny zoma lasa teo i Hervé, raim-pianakaviana avy any Antsirabe. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
hifanandrinany (nitranga in-1) : Nanainga omaly hihazo an'i Sri Lanka izy ireo hiatrika ny lalao telozoro hifanandrinany amin'i Sri Lanka (26 oktobra) sy Pologne (30 oktobra) hoentina manomana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika vondrona A, hatao eto amintsika amin'ny taona ho avy. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
nahenoana (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory izay no nahenoana raim-pianakaviana nanolana ny zanany naterany efa-bavy. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
tranona (nitranga in-1) : Araka ny vaovao azo avy amin'ny vondron-tobim-pileovan'ny zandarimariam-pirenena ao Diana dia ny famotehana ireo tranona zandary no nisamborana ny fito tamin'ireo voarohirohy ireo. (FIKOMIANA TANY NOSY-BE-Niampy 13 indray ireo hatolotra ny Fampanoavana eto Antananarivo)
bebe (nitranga in-1) : Midika fa misy fifandra-isana bebe kokoa amin'ny rainy ny zanaka vavy sy ny reny kosa amin'ny zanaka lahy, io «Complexe d'Oedipe» io. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
momban' (nitranga in-1) : dr Andrianaivo VIctorine,manampahaizana manokana momban'ny toetra
Raràn'ny soatoavina malagasy ny firaisana eo amin' ny olom-pady. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
hampihatra (nitranga in-1) : Tena fanjakana hatanjaka sy afaka hampihatra ny fahefana, araka ny tokony ho izy koa ve anefa ny ho avy manaraka eo. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
HIJERY (nitranga in-1) : HIJERY IFOTONY
voarohirohy (nitranga in-2) : nanainga afak'omaly maraina tany Nosy-Be ireo mpitandro ny filaminana nitondra ireo olona 13, anisan' ireo voarohirohy tamin'ireny korontana niafara tamin'ny famonoana olona sy famo-tehana fananan'olona tamin' ny fiandohan'ny volana oktobra ireny. (FIKOMIANA TANY NOSY-BE-Niampy 13 indray ireo hatolotra ny Fampanoavana eto Antananarivo)
kandida (nitranga in-1) : Noho ny fahavitsian'ireo mpikambana Cst niatrika ny fivoriana voalohany, tokony nandinihana ny raharaha mahakasika ny banky «Bni Madagascar» sy ny voalaza fa fanjavonana fiara manokana, mpitondra vola avy amin'ny Banky Foiben'i Madagasikara ary ny fanoloana ny filoha lefitry ny Cst, Roland Ratsiraka, kandida filoham-pirenena no nahatonga io fanapahan-kevitra io. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
Maryl (nitranga in-1) : Soratra : Naka Andrianjanaka
hataony (nitranga in-1) : Tsy mety afaka an-tsaiko ny hafaliany rehefa mahita lamasinina», hoy hatrany Randrianarivelo Henintsoa Elie, rainy
ahafahan' (nitranga in-2) : «Hosarahan-toerana ny lehilahy sy ny vehivavy ka ny toerana handihizana ihany no ahafahan'izy ireo mihaona», hoy ihany izy. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
itondran' (nitranga in-1) : Nanamarika anefa ireo mpikambana sasany ao anatin'ny Vondron'ireo mpandraharaha solika (Gpm) fa toy ny filam-baniny ihany ny pitsopitsony itondran'ny Tahirim-bolam-panjakana fanakianana amin'ireo Ccal. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Jeunes (nitranga in-1) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
noahiahiana (nitranga in-1) : zandary iray no noahiahiana ho isan'ireo mpandroba tamin'ny vaky trano nisesy teny Andoharanofotsy. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
ireto (nitranga in-4) : Raikitra ny vela-pandrika napetraky ny polisy mba hisamborana ireto ahiahiana ho mpamaky fasana ireto. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
Ilafy (nitranga in-1) : Mivelatra tsinona ny safidy sady ho afa-pahasahiranana raha mba hiampita amin'iny faritra Ankerana-Analamahitsy-Ambohitrarahaba hatreny Ankadikely sy Ilafy iny. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
national (nitranga in-1) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Afrika (nitranga in-1) : Nanainga omaly hihazo an'i Sri Lanka izy ireo hiatrika ny lalao telozoro hifanandrinany amin'i Sri Lanka (26 oktobra) sy Pologne (30 oktobra) hoentina manomana ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika vondrona A, hatao eto amintsika amin'ny taona ho avy. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
mampanahy (nitranga in-1) : Ny tena mampanahy dia ny fifampia-rovana misy eo amin'ireo sokajina mpitandro ny filaminana sasany. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
John (nitranga in-1) : a
hamela (nitranga in-1) : “Tsy hamela izany handalo fotsiny izahay satria manimba ny baolina kitra malagasy izany”, hoy izy namarana ny teniny. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
saropiaro (nitranga in-1) : Noho izay firaiketam-po izay dia hita ho saropiaro tamin'ny rainy i Sylvie. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
hanohizana (nitranga in-1) : Saziana amin'ny fitokonana tsy hanohizana ny asam-pitaterana ireo mponina sy mpanjifa satria moa an-dry zalahy ny fiara ka izay tiany hatao io. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Bongolava (nitranga in-2) : Toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Menabe, Boeny, Matsiatra Ambony. (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
nozaray (nitranga in-1) : Ar 790 tapitrisa no efa nozarain'ny Peo ny dimy tamin' ireo mpilalao azy hatramin'izay. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
mibanjina (nitranga in-1) : Mahavatra mifoha amin'ny enina ora maraina izy ka maka toerana tsara mibanjina ny dadany miomana handeha hamonjy ny fiasany any an-drenivohitra, hoy ny fitantaran'ny fianakaviana. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
namandrihana (nitranga in-1) : Efa nihodidina ilay toerana namandrihana azy ireo ny mpitandro ny filaminana ka noraisim-potsiny ny iray, izay efa nitondra gony feno taolam-paty. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
Ambolivato (nitranga in-1) : Zazalahy voatifitra > Nisy jiolahy nanafika ny fianaka- viana iray tao Ambolivato, distrikan'i Fenoarivo Atsinanana, ny 21 oktobra teo tamin'ny 11 ora sy sasany alina. (Sombiny)
Danz (nitranga in-1) : a
imason' (nitranga in-1) : Ankoatra izay dia nisy ihany koa famelezana totohondry an-kitsirano nataona mpilalao iray avy eo amin'ity mpifanandrina amin'izy ireo ity an'i Lanto teo imason'ny mpitsara saingy tsy nahazoana karatra mena fa nijanona ho mavo. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
sakantsakana (nitranga in-1) : Mahagaga mantsy fa rehefa misy ny lalan-jotra vaovao manampy isa ny fiara mpitatitra dia miseho hatrany ny olana sy sakantsakana ataon'ireo efa tompon-dalana teo aloha. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
sedray (nitranga in-1) : Ny olana ara-bola sedrain'izy ireo eo amin'ny fivezivezena mankany Fianarantsoa sy ho aty Antananarivo no antony tsy naharaikitra izany tamin' ny 13 – 19 oktobra. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
nikotrehana (nitranga in-1) : Araka ny tatitra avy amin'ity manamboninahitra ity hatrany dia paikady hisakanana ny fanatontosana ny fifidianana no antony nikotrehana io hetsika io. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
higadona (nitranga in-1) : Anio no higadona eto amintsika ity farany. (Tapatapany)
ataon' (nitranga in-2) : Mahagaga mantsy fa rehefa misy ny lalan-jotra vaovao manampy isa ny fiara mpitatitra dia miseho hatrany ny olana sy sakantsakana ataon'ireo efa tompon-dalana teo aloha. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
taksiben' (nitranga in-1) : Saingy mampihena ny vola miditra any amin'ireo taksiben'ny zotra E, ahitàna ny kaoperativa Kofiatra sy Koloina mampitohy an'Ambohimangakely sy Behoririka izany. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Làlana (nitranga in-2) : Manomboka ny 28 oktobra izao no afaka maka izany ireo mpianatra, ho an'ny eo anivon'ny fakiolten'ny Làlana, Toekarena, Fitantanana ary Haifiaraha-monina (Degs). (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
fizotry (nitranga in-2) : HIJERY IFOTONY
Ho avy hanara-maso sy hijery ifotony ny fizotry ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahina eto Madagasikara i Jean Claude de l'Estrac, sekretera jeneralin'ny vaomieran'ny Rano- masimbe Indianina. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
nanana (nitranga in-1) : Tsy mety afaka an-tsaiko ny hafaliany rehefa mahita lamasinina», hoy hatrany Randrianarivelo Henintsoa Elie, rainy
nahazoako (nitranga in-1) : Ny iray no nahazoako io Ar 5 tapitrisa io. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
hamoizako (nitranga in-1) : Hoy aho tamin'izany hoe tsy ataoko mandre ny hirifirim-piainana izy, na hamoizako ny aiko aza izany», hoy ihany ilay raim-pianakaviana vonton'alahelo. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
tiany (nitranga in-2) : Saziana amin'ny fitokonana tsy hanohizana ny asam-pitaterana ireo mponina sy mpanjifa satria moa an-dry zalahy ny fiara ka izay tiany hatao io. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
eken' (nitranga in-1) : Raha vao misy tsy mety na kely aza dia efa tsy eken'io milina io. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Afrobasket (nitranga in-3) : Hihaona voalohany ny ekipam-pirenana sokajy latsaky ny 16 taona niatrika ny Afrobasket U16 farany teo sy ny ekipam-pirenena sokajy latsaky ny 17 taona niatrika ny lalaon'ny CJSOI (Commission de la Jeunesse et des sports de l'océan Indien) tany Kaomôro, tamin'ny taona 2012. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
andraikitry (nitranga in-1) : Indrindra ny fampianarana ny andraikitry ny tsirairay eo anivon'ny tokantrano: ny ray, ny reny, ny zanaka. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
somby (nitranga in-1) : Mampirina ny kiraron'ny rainy, manitsakitsaka ny lamosiny, izany no setriny atolotr'ity sombin'ny ainy ilay ray niteraka azy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nataon' (nitranga in-8) : Raha nanontaniana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny Cua, Rasamimanana Olga, dia nanambara izy fa ara-dalàna ny fangatahana nataon'ny fikambanana nanorina ny trano. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
itoeran' (nitranga in-1) : «Amoron'arabe ny trano itoeran'ny bebeny. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
anehoan' (nitranga in-1) : Ankoatra izay, ny fahara-tsian'ny fiainana amin'izao, izay mampitaky fitiavana sy tambitamby, ka mety any amin'izany filàna izany no anehoan'ny raim-pianakaviana izany. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
fihetsiky (nitranga in-1) : *Inona no mety ho fiantraikan'ny fihetsiky ny raim-pianakaviana toy izao eo amin'ny zanany. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
Ibrahim (nitranga in-1) : a
filohana (nitranga in-1) : Dia miditra an-tsehatra ny filohana kaope-rativa miaro ireo mpitatitra ao aminy, tsy mihevitra na dia kely akory aza ny fahasahiranana ho afaka amin'ny mpandeha. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Ajax (nitranga in-1) : Vokatra
hisitraka (nitranga in-1) : tANTARA MITOHY
Roméo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Notsindrian' (nitranga in-1) : Notsindrian'ity manamboninahitra iray eo anivon' ny zandarimariam-pirenena ity ihany koa fa «nomena ireo fitaovana rehetra ahafahana miatrika izay mety ho fanafihana ny lapan'i Mahazoarivo ireo mpitandro ny filaminana ireo». (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
nifampizara (nitranga in-1) : isan'ireo mpilalao nifampizara ilay tontona Ar 10 tapitrisa tamin'ny fahitana ny efatra tamin'ireo laharana dimy nosarihina tamin'ny lalao vintana «Peo ny dimy», ny zoma lasa teo i Hervé, raim-pianakaviana avy any Antsirabe. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
kandidà (nitranga in-1) : miangavy ireo kandidà tsy afaka hiatrika ny fihodinana faharoa amin' ny fifidianana Filoham-pirenena mba hanaiky ny voka-pifidianana ofisialy havoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (Ffm). (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
fiara (nitranga in-15) : Ho fitakiana ny famerenana amin'izy ireo ny tany nato-kana ho fiantsonan'ny fiara, izay nangatahany tamin'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) ary efa nazahoany fankatoavana, dia nanapa-kevitra ny tsy hifidy izy ireo ny zoma izao. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
natahotra (nitranga in-1) : Nifanenjika izy roa kely ka i Sylvie no nihazakazaka mafy tany amin'ny arabe fa ilay havany kosa natahotra ka tsy nandeha. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
hisakanana (nitranga in-1) : Araka ny tatitra avy amin'ity manamboninahitra ity hatrany dia paikady hisakanana ny fanatontosana ny fifidianana no antony nikotrehana io hetsika io. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
nanolana (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory izay no nahenoana raim-pianakaviana nanolana ny zanany naterany efa-bavy. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
nataona (nitranga in-1) : Ankoatra izay dia nisy ihany koa famelezana totohondry an-kitsirano nataona mpilalao iray avy eo amin'ity mpifanandrina amin'izy ireo ity an'i Lanto teo imason'ny mpitsara saingy tsy nahazoana karatra mena fa nijanona ho mavo. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
2014 (nitranga in-1) : Hatreto ihany koa dia fantatra fa mbola tsy voarain' ireo mpikambana eo anivon'ny Parlemantan'ny tetezamita ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2014. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
Michel (nitranga in-1) : “Fanomanana sahady ny fandraisana anjarantsika eo amin'ny Afrobasket U18 izany no hoentina ihany koa miomana amin'ny Lalaon'ny Nosy andiany fahasivy, any La Réunion amin'ny taona 2015”, hoy
ahitàna (nitranga in-1) : Saingy mampihena ny vola miditra any amin'ireo taksiben'ny zotra E, ahitàna ny kaoperativa Kofiatra sy Koloina mampitohy an'Ambohimangakely sy Behoririka izany. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Elie (nitranga in-2) : «Tena hainy tsianjery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io hira io», hoy ny rainy, Randrianarivelo Henintsoa Elie, izay hita ho mbola tena ao anatin'ny fangirifiriana tanteraka. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Ratah (nitranga in-1) : Ankoatra ireo hiran'ny tarika Label, fanomezana atolotr'izy ireo ny mpankafy ao anatin'ity rakitsary ity ny hira faha-10 «Jao lehilahy» sanganasan'
filàna (nitranga in-1) : Ankoatra izay, ny fahara-tsian'ny fiainana amin'izao, izay mampitaky fitiavana sy tambitamby, ka mety any amin'izany filàna izany no anehoan'ny raim-pianakaviana izany. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
Kilometatra (nitranga in-1) : Kilometatra an'arivony no vitany vao nahavita ny rakitsary ahitana hira sivy. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
sokajina (nitranga in-1) : Ny tena mampanahy dia ny fifampia-rovana misy eo amin'ireo sokajina mpitandro ny filaminana sasany. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
ekipan' (nitranga in-1) : Faharesena tamin'ny isa 3 no ho 0 no nanjo ity ekipan'i Frank Rajaonarisamba sy Pierrot Rakotomanga ity. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
nahafatesany (nitranga in-1) : «Tsy tany an-toerana izahay tamin' ny andro nahafatesany fa nikarakara fivoriana, ka ny reniben'ny no nitaiza azy sy ny zandriny telo volana», hoy hatrany ny rain'ilay zaza. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nahitana (nitranga in-1) : nahitana grenady teo amin'ny toerana fiantsonan'ny fiarakaretsaka tao Ampasambazaha, Fianar-antsoa, afak'omaly, tokony ho tamin'ny 5 ora hariva. (FIANTSONANA TAKSY-Grenady tsy mety mipoaka natao fampitahorana)
hisian' (nitranga in-7) : Toetry ny andro > Azo antenaina ny tsy hisian'ny orana eto amin'ny faritra Analamanga mandritra ny fifidianana amin'ny Zoma izao. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
Madagascar (nitranga in-1) : Noho ity faritra ity manana ny anjara toerany eo amin'ny lafiny toekarena sy mila ny serasera amin'ireo faritra hafa sy ny any ivelany, dia manome tolotra manokana ho an'ireo mpanjifa ny Orange Madagascar. (SERASERA-Mampiantrano hetsika ho an’ny “Internet” i Toamasina)
nahatonga (nitranga in-2) : «Anisan'ny tanjon'ny tarika Label ny fanehoana ny hakanton'i Gasikara sy ny Malagasy ao anatin' ireo rindran-tsary ireo, ka nahatonga anay hitety faritra maro nanao ny fandraisana ny sary», araka ny fanazavan'i Label, raha nampaha- fantatra ity vokatra ity, omaly tetsy amin'ny «3 styles» Analakely. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
siteran' (nitranga in-1) : Manao inona ny mini- siteran'ny Fitaterana sy ireo rantsa-mangaikany no toa tsy mitady vahaolana amin'ity raharaha ity, fa zara aza mampiady ny samy mpitatitra. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
mamarara (nitranga in-1) : Tsy dia tena zava-baovao intsony ny fisian'ireo saonjo mamarara sy ireo »ondry mania » eo anivon'ny mpitandro ny filaminana. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
Taolagnaro (nitranga in-1) : Roa lahy izy ireo no mpamily, irony fiara mpitatitra olona marika TATA irony, mampitohy an'Anta-nanarivo sy Taolagnaro. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
Tsaroako (nitranga in-1) : Tsaroako tsara izahay rehefa mandeha mivavaka any am-piangonana dia tondroiny ny sarin'i Masina Maria sady miteny izy hoe io ny maman'i Jesoa. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
zazavavikely (nitranga in-1) : Io hiram-pivavahana io no anisan'ny tena ankafizin-dRandrianarivelo Sylvie Laetitia, zazavavikely vao roa taona monja saingy nindaosin'ny fahafatesana tampoka ny alarobia 16 oktobra teo. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Randrianja (nitranga in-1) : Juliano Randrianja
inian' (nitranga in-1) : Voafonja iray hafa, voalazan'ny tatitry ny zandarimaria indray fa inian' ny mpiandry fonja avoaka mba hanao fanafihana mitam-piadiana. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
Ihorombe (nitranga in-1) : Ekipa avy amin'ny ligim-paritra Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Ihorombe ary Matsiatra Ambony no tokony hifanandrina tamin'izany. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
ball (nitranga in-3) : taorian'ny fifaninanam-pirenena ho an'ny basket ball sokajy N1A, tamin'ny faran'ny herinandro teo, dia fety mitohy ny an'ity taranja ity eny amin'ny lapan' ny Fanatanjahantena Mahamasina. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
hoezahina (nitranga in-1) : “Manana ny mampiavaka azy ny Makis ary izany no hoezahina hohatsaraina mandritra ny lalao telozoro. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Barcelone (nitranga in-1) : Vokatra
hampita (nitranga in-1) : Manomboka eo ho eo amin'ny fito ora no hampita mivantana ny fanisam-bato sasantsasany amin'ireo biraom-pifidianana eto Antananarivo ny fahitalavi-pirenena (Tvm) sy ny Rnm. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
Donné (nitranga in-1) : a
Bâle (nitranga in-1) : Vokatra
Reelmada (nitranga in-1) : Tonga naka ny lokany tetsy amin'ny foiben'ny Reelmada, Andraharo ny tenany. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
nanilika (nitranga in-1) : Aorian'io dia mbola hifampiresaka amin'ny federasiona aho amin'ny mety hijanonako eto, izay efa nambarako matetika ny fahavononako”, hoy i Philippe Canitrot, izay nitondra an'i Zimbaboe nanilika an'i Madagasikara teo amin' ny manasa-dalan'ny Can 2013 vondrona A. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
dada (nitranga in-1) : Rehefa tonga avy miasa indray kosa ny hariva, dia efa izy indray no voalaza fa mihazakazaka voalohany mi­tsena an-drainy sady manontany hoe: «inona no nentin'ny dada ho ahy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nandonan' (nitranga in-1) : Tsy lavitra ity toerana ity no nandonan'ny kamiao an'i Sylvie kely (sisiny havia)
iraky (nitranga in-1) : Nifanome fotoana àry ireo iraky ny polisy sy ireo andian'olona ka teo no nahatratrarana azy ireo. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
hahavita (nitranga in-1) : *Ny raim-pianakaviana rehetra ve no mety hahavita io fihetsika mamoafady io. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
fani­tsiana (nitranga in-1) : Nisy fanitsiana nasaina nataon'ireo kaompania saingy tsy mbola tonga aty aminay io fani­tsiana io ka mahatara ny fandoavana ireo faktiora». (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
notetezina (nitranga in-1) : Faritra maro, niainga tany Morondava ka hatrany Nosy-Be, Toamasina… no notetezina
menaky (nitranga in-1) : Rehefa tarihiny mandeha mamonjy ny reniny any am-pivarotana aho, na dia akaiky aza ilay toerana, dia tsy manaiky izy raha tsy misolo akanjo ary izy ihany no misafidy izany», hoy indray ny rainy nanao tsiahy ny fotoana niarahany tamin'ilay menaky ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nenty (nitranga in-1) : Rehefa tonga avy miasa indray kosa ny hariva, dia efa izy indray no voalaza fa mihazakazaka voalohany mi­tsena an-drainy sady manontany hoe: «inona no nentin'ny dada ho ahy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
handrara (nitranga in-1) : raha hitombo ve ny mpivaro-bary ka tsy ho sahirana ny mpanjifa hitady tsena ho an'ity foto-tsakafony ity, handrara izany ve ny fanjakana. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Florens (nitranga in-1) : «Efa vonona amin'ny fandraisana fepetra momba izany izahay ary tsy handefitra mihitsy», araka ny fanamarihana nataon'ny kolonely Florens Rakotomahanina, lehiben'ny Cirgn eto Analamanga, omaly. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
hanafika (nitranga in-1) : Tatitra avy amina manamboninahitra iray eo anivon'ny zandarimariam-pirenena izay nisafidy ny tsy hitonona anarana no nahalalana fa nisy andiana miaramila voalaza fa saika hanafika ity lapa ity, ny talata lasa teo. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
hivondronan' (nitranga in-1) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Cnaps (nitranga in-6) : Miisa 700 amin' izao fotoana ny mpiasan'ny Cnaps, ka ny 80%-n'ireo no mandray anjara amin'ity fanadinana ity, izay hotante- rahina ny 7 desambra izao. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
fifandaminana (nitranga in-1) : Matahotra ny hifanehatra amin'ny tsy fifandaminana ihany koa izahay any aoriana», hoy hatrany Andri-anasoa Mamy. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
Filankevitry (nitranga in-3) : miangavy ireo kandidà tsy afaka hiatrika ny fihodinana faharoa amin' ny fifidianana Filoham-pirenena mba hanaiky ny voka-pifidianana ofisialy havoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (Ffm). (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
Andraharo (nitranga in-1) : Tonga naka ny lokany tetsy amin'ny foiben'ny Reelmada, Andraharo ny tenany. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
Aleonay (nitranga in-1) : Aleonay miandry ny fahavitan'io fifidianana io mihitsy aloha mba hisorohana ny mety hisian'ny tsy fitovian-kevitra any aoriana», araka ny fanazavan'ny filohan'ny Cst, ny jeneraly Dolin Rasolosoa, omaly. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
fakiolten' (nitranga in-2) : Manomboka ny 28 oktobra izao no afaka maka izany ireo mpianatra, ho an'ny eo anivon'ny fakiolten'ny Làlana, Toekarena, Fitantanana ary Haifiaraha-monina (Degs). (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
Philippe (nitranga in-3) : Efa tonga ary niara-dia amin'izy ireo any an-toerana ilay teratany Frantsay, Philippe Canitrot, hanampy an'i Berthin Zoto amin'ny fitantanana ny ekipam-pirenena malagasy amin'io fifaninanana io. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
nanapahana (nitranga in-1) : Fotoana izay nifanojo indrindra tamin'ny fanatontosana ny Filankevitry ny governemanta ka nandinihana sy nanapahana hevitra mahakasika ny raharaham-pifidianana. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
Fabrice (nitranga in-2) : a
Ireo mandrafitra ny All Stars All Stars senior: Claudio (Ascum), Biana (Ascut), Rina (Ascut), Fataka (Ascut), Guy (Ascut), Saka (GNBC), Rado (Cosfa), Donné (Cospn), Jules (Cospn), Thierry (Fanatic), Danz (Sebam), Fidy (Sebam) All Stars espoir : Nasper (Ascum), Davi (Ascum), Zayad (Ascum), Anthony (Cosfa), Ibrahim (Sebam), Francis (GNBC), John (Sud-Ouest), Tanjona (Ascut), Lalason (Ascut), Fabrice (GNBC), Mamy Kely (Sebam), Borida (Cospn), Marc (Sebam). (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
Toamasina (nitranga in-2) : tanterahina any Toamasina nanomboka omaly ka hatramin'ny 04 novambra izao ny hetsika ho an'ny «Internet». (SERASERA-Mampiantrano hetsika ho an’ny “Internet” i Toamasina)
naharaikitra (nitranga in-1) : Ny olana ara-bola sedrain'izy ireo eo amin'ny fivezivezena mankany Fianarantsoa sy ho aty Antananarivo no antony tsy naharaikitra izany tamin' ny 13 – 19 oktobra. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
masimbe (nitranga in-1) : HIJERY IFOTONY
Analamanga (nitranga in-5) : Toetry ny andro > Azo antenaina ny tsy hisian'ny orana eto amin'ny faritra Analamanga mandritra ny fifidianana amin'ny Zoma izao. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
Niitatra (nitranga in-1) : Niitatra tany amin'ireo toerana roa ireo ny lalan'ny taksibe ao anatin'ny kaoperativa Mirindra misy ny taksibe zotra 163. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
havoakan' (nitranga in-1) : miangavy ireo kandidà tsy afaka hiatrika ny fihodinana faharoa amin' ny fifidianana Filoham-pirenena mba hanaiky ny voka-pifidianana ofisialy havoakan'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (Ffm). (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
nanafika (nitranga in-1) : Zazalahy voatifitra > Nisy jiolahy nanafika ny fianaka- viana iray tao Ambolivato, distrikan'i Fenoarivo Atsinanana, ny 21 oktobra teo tamin'ny 11 ora sy sasany alina. (Sombiny)
Hikara­karako (nitranga in-1) : Hikara­karako ny fianaran-janako aorian'ny fahazoany ny mari-pahaizana bakalorea io vola io», hoy izy. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
Gabriel (nitranga in-1) : Nanome toky ihany koa ny jeneraly Gabriel Rafanoharana, isan'ireo mpitarika ny Emmo-Far fa tsy maintsy hofehezina tanteraka ny fitandroana ny filaminana aorian'ny fifidianana. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
namarana (nitranga in-1) : “Tsy hamela izany handalo fotsiny izahay satria manimba ny baolina kitra malagasy izany”, hoy izy namarana ny teniny. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
natao (nitranga in-3) : Rehefa natao ny fanadi-hadiana dia hita fa efa niala ny vodin'ilay grenady fa ny vatany izay tsy afaka mipoaka intsony sisa tavela. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
nanova (nitranga in-1) : “Ny fiovan'ny fandaharam-potoana any an-toerana no nanova ny andro handehanana”, hoy i Berthin Zoto, mpanazatra ny Makis. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
nanorina (nitranga in-1) : Raha nanontaniana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny Cua, Rasamimanana Olga, dia nanambara izy fa ara-dalàna ny fangatahana nataon'ny fikambanana nanorina ny trano. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
atolotry (nitranga in-1) : Filam-baniny
namoahan' (nitranga in-1) : Nisy efa namoahan'ny Fitsarana tao Antananarivo didy fampisamborana ny iray amin' izy ireo», hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimaria. (FIKOMIANA TANY NOSY-BE-Niampy 13 indray ireo hatolotra ny Fampanoavana eto Antananarivo)
Lalason (nitranga in-1) : a
beben' (nitranga in-1) : Rehefa mahita an'i Masimbavy Anne dia miteny koa izy hoe »io ny beben'i Jesoa »», hoy ny fitantaran-dRanjamanana Agnès Raymonde, reniben'ilay zaza namoy ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Sergio (nitranga in-1) : Soratra : Naka Andrianjanaka
Claudio (nitranga in-1) : a
handraisana (nitranga in-2) : Omaly no nivoaka ny daty handraisana izany. (FIARAHA-MIASA-Namatsy fitaovana ny kaomi-nina Belobaka i Mayotte)
fahazoany (nitranga in-1) : Hikara­karako ny fianaran-janako aorian'ny fahazoany ny mari-pahaizana bakalorea io vola io», hoy izy. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
mirefy (nitranga in-1) : Noho ny ezaky ny tetikasam-piaraha-miasan'ny fanja- kana sy ny tsy miankina (tetikasa 3P), eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua), dia vita ny fana-vaozana ity lalan-kely ity sy ny tata-dranony, izay mirefy 87 m. (FOTODRAFITRASA-Nohavaozina ny lalan-kely eny Ambondrona-Ambodifilao)
mitsoriadriaka (nitranga in-1) : Izy rahateo dia zaza mavitrika be no tia mitsoriadriaka koa. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Marc (nitranga in-1) : a
Rakotomanga (nitranga in-1) : Faharesena tamin'ny isa 3 no ho 0 no nanjo ity ekipan'i Frank Rajaonarisamba sy Pierrot Rakotomanga ity. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
Mandriambero (nitranga in-1) : Torak'izany koa ny «Avy mangataka izahay» izay atao kosa indray eny amin'ny SK Melody Mandriambero ny 08 novambra izao. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
anisan' (nitranga in-2) : nanainga afak'omaly maraina tany Nosy-Be ireo mpitandro ny filaminana nitondra ireo olona 13, anisan' ireo voarohirohy tamin'ireny korontana niafara tamin'ny famonoana olona sy famo-tehana fananan'olona tamin' ny fiandohan'ny volana oktobra ireny. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Mifampiaro (nitranga in-1) : Mifampiaro amin'ny ratsy tsotra izao. (Bao tsy mivily-ANKAMANTATRA)
Jao' (nitranga in-1) : Faritra maro, niainga tany Morondava ka hatrany Nosy-Be, Toamasina… no notetezina
lalàna (nitranga in-1) : Somary akisatsika kely ny resaka lalàna. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Vienne (nitranga in-2) : Isan'ireny ny teo amin'ny andro fahatelo ka nandavoan' izy ireo tamin'ny isa 3 no ho 0 ny Austria Vienne, tao amin'ny kianja Ernst Happel Stadion Vienna. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
Berthin (nitranga in-2) : Efa tonga ary niara-dia amin'izy ireo any an-toerana ilay teratany Frantsay, Philippe Canitrot, hanampy an'i Berthin Zoto amin'ny fitantanana ny ekipam-pirenena malagasy amin'io fifaninanana io. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Vienna (nitranga in-1) : Isan'ireny ny teo amin'ny andro fahatelo ka nandavoan' izy ireo tamin'ny isa 3 no ho 0 ny Austria Vienne, tao amin'ny kianja Ernst Happel Stadion Vienna. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
handihizana (nitranga in-1) : «Hosarahan-toerana ny lehilahy sy ny vehivavy ka ny toerana handihizana ihany no ahafahan'izy ireo mihaona», hoy ihany izy. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
tapakila (nitranga in-1) : Tsy hiverina eto an-tanindrazana ny delegasiona malagasy raha tsy amin' ny 5 novambra ho avy izao, araka ny tapakila eny am-pelatanan'izy ireo. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Frank (nitranga in-1) : Faharesena tamin'ny isa 3 no ho 0 no nanjo ity ekipan'i Frank Rajaonarisamba sy Pierrot Rakotomanga ity. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
rakitsary (nitranga in-2) : Kilometatra an'arivony no vitany vao nahavita ny rakitsary ahitana hira sivy. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
voaloan' (nitranga in-1) : mihoa-pampana ny solika alain'ireo fiaram-panjakana sasany
nanontaniana (nitranga in-1) : Raha nanontaniana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny Cua, Rasamimanana Olga, dia nanambara izy fa ara-dalàna ny fangatahana nataon'ny fikambanana nanorina ny trano. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
bileta (nitranga in-1) : «Ny fividianana io vokatra io no bileta tokana ahafahana miatrika ny fampisehoana», hoy ihany izy somary nanao vazivazy. (RAKITSARY VAOVAO-Kilometatra maro vao vitan’ i Label ny «Allumez-swinguez»)
notetezy (nitranga in-1) : Raha handeha hijery ny tsindry hisatra tao ambanin' ilay fiara vaventy noentiny ny mpamily iray no nandroso tampoka ny fiara ka notetezin'ireo kodiarana avy hatrany ny tapany am-boniny rehetra. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
distrikan' (nitranga in-3) : Nivadihan'ny namany > Teratany Frantsay iray no nivadihan'ny namany, izay mpanamboatra ny fiarany ihany, tao Manambondro, distrikan'i Vangaindrano, ny 20 oktobra teo, tamin' ny 10 ora alina. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
mpilalao (nitranga in-11) : Lalao faharoa isan'ireo tena andrasan'ny rehetra, ny fihaonana eo amin'ny All Stars espoir misy ireo mpilalao nisongadina tamin'ny «Challenge national Jeunes U22» amin'ny All Stars Senior, izay hivondronan' ireo mpilalao zokiny nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny Afrobasket lehilahy 2011. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
totohondry (nitranga in-1) : Ankoatra izay dia nisy ihany koa famelezana totohondry an-kitsirano nataona mpilalao iray avy eo amin'ity mpifanandrina amin'izy ireo ity an'i Lanto teo imason'ny mpitsara saingy tsy nahazoana karatra mena fa nijanona ho mavo. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
mam­piasa (nitranga in-1) : Tafiditra ao anatin'izany ny «Clé 3G+», «Domino na Flybox», «Netbook»… ho an'ireo mpanjifa mam­piasa fahana. (SERASERA-Mampiantrano hetsika ho an’ny “Internet” i Toamasina)
Raràn' (nitranga in-1) : dr Andrianaivo VIctorine,manampahaizana manokana momban'ny toetra
volabe (nitranga in-1) : Ankoatra izany dia hisy hatrany ireo fifaninanana tifi-davitra hahazoana isa telo hahazoana volabe mitentina 20 tapitrisa
ariary sy ny “Dunk”. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
hanafainganana (nitranga in-1) : Voalaza fa efa nisy fihaonana teo amin'ny roa tonta entina hanafainganana ny famahana ny olana. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Anjomakely (nitranga in-1) : Voadonan'ny kamiao teny Anjomakely, akaikin'ny kaominina ity zaza ity, raha izy nilalao iny. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Kofiatra (nitranga in-1) : Saingy mampihena ny vola miditra any amin'ireo taksiben'ny zotra E, ahitàna ny kaoperativa Kofiatra sy Koloina mampitohy an'Ambohimangakely sy Behoririka izany. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
Austria (nitranga in-2) : Isan'ireny ny teo amin'ny andro fahatelo ka nandavoan' izy ireo tamin'ny isa 3 no ho 0 ny Austria Vienne, tao amin'ny kianja Ernst Happel Stadion Vienna. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
niarahany (nitranga in-1) : Rehefa tarihiny mandeha mamonjy ny reniny any am-pivarotana aho, na dia akaiky aza ilay toerana, dia tsy manaiky izy raha tsy misolo akanjo ary izy ihany no misafidy izany», hoy indray ny rainy nanao tsiahy ny fotoana niarahany tamin'ilay menaky ny ainy. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nilaza (nitranga in-4) : Tamin'ny zoma 11 oktobra dia nisy olona tsara sitrapo nanatona ny polisy ary nilaza fa misy olona telo lahy tao amin'ny trano fisotroana iray ao an-toerana nilaza fa mitady mpividy taolam-paty ary nampandre azy ireo raha liana tamin'izany. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
ekipa (nitranga in-1) : Andrasana ny fanapahan-kevitry ny federasiona eo amin'ny fanendrena ireo ekipa hisolo tena ny faritra atsimo amin'ny dingan' ny famaranana lehibe hotontosaina eto Antananarivo, amin'ny 4 – 10 novambra. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
Behoririka (nitranga in-1) : Saingy mampihena ny vola miditra any amin'ireo taksiben'ny zotra E, ahitàna ny kaoperativa Kofiatra sy Koloina mampitohy an'Ambohimangakely sy Behoririka izany. (Raha…RAHA-Vola aloha, vao olona)
nampaha (nitranga in-1) : tao anatin'ny fitadiavana ny kanto sy ny kalitao, teraka ihany ary nampaha -fantarina omaly ny raki-
Ralitera (nitranga in-1) : Miangaly Ralitera. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
Nomarihy (nitranga in-1) : Nomarihin'ny Gpm fa ny tompon'andraiki-panjakana tena tompon'ny Ccal ihany no mahazo maka izany eny amin'ireo tobin-dasantsy ary tsy azo atakalo vola izany. (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
nahatratrarana (nitranga in-1) : Nifanome fotoana àry ireo iraky ny polisy sy ireo andian'olona ka teo no nahatratrarana azy ireo. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
bato (nitranga in-1) : Ireo mpanao gazety eo anivon'ny Rnm ihany koa no hanome ireo toromarika rehetra tsara ho fantatra mahakasika ny fomba ahafahan'ireo olom-pirenena rehetra mandatsa- bato io rahampitso io. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
Nasper (nitranga in-1) : a
nampiakarana (nitranga in-1) : Lalao nampiakarana ny tontona ho Ar 15 tapitrisa ho an'ireo mahita laharana dimy sy Ar 10 tapitrisa ho an'ireo nahita laharana efatra nandritra ny fisarihana ny zoma lasa teo no nahazoan'ireo mpilalao maro hafa. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
Nahitako (nitranga in-1) : Nahitako laharana roa ny karakara telo. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
tsary (nitranga in-1) : tao anatin'ny fitadiavana ny kanto sy ny kalitao, teraka ihany ary nampaha -fantarina omaly ny raki-
nosarihina (nitranga in-1) : isan'ireo mpilalao nifampizara ilay tontona Ar 10 tapitrisa tamin'ny fahitana ny efatra tamin'ireo laharana dimy nosarihina tamin'ny lalao vintana «Peo ny dimy», ny zoma lasa teo i Hervé, raim-pianakaviana avy any Antsirabe. (LEHILAHY TSARA VINTANA-«Hiantohako ny fianaran-janako ny Ar 5 tapitrisa azoko»)
hijanona (nitranga in-1) : Telo herinandro aloha no hijanona ho an'i Madagasikara ny tenako. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
stars (nitranga in-1) : Fiaraha-miasa eo amin'ny federasiona sy ny fahitalavitra Rta no hampisy ny “All stars gasy”, izay hahitana fampisehoana ataon' ireo kalaza eo amin'ity baolina volom-boasary ity. (BASKET – ALL STARS GASY-Fety mitohy ny an’ ny federasiona)
Rasoamaromaka (nitranga in-2) : Tsy hanaiky mora fotsiny izahay fa hametraka fitoriana any amin'ny federasiona malagasin'ny baolina kitra sady hanokatra fanadihadiana mikasika izany”, hoy i Hery Rasoamaromaka na i Hery Be, filohan'ny Tana Formation FC. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
nihazakazaka (nitranga in-1) : Nifanenjika izy roa kely ka i Sylvie no nihazakazaka mafy tany amin'ny arabe fa ilay havany kosa natahotra ka tsy nandeha. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
nanambara (nitranga in-2) : Raha nanontaniana ny sekretera jeneraly eo anivon'ny Cua, Rasamimanana Olga, dia nanambara izy fa ara-dalàna ny fangatahana nataon'ny fikambanana nanorina ny trano. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
Dada (nitranga in-1) : Tsindrimandry
Jean (nitranga in-2) : “Fanomanana sahady ny fandraisana anjarantsika eo amin'ny Afrobasket U18 izany no hoentina ihany koa miomana amin'ny Lalaon'ny Nosy andiany fahasivy, any La Réunion amin'ny taona 2015”, hoy
i Jean Michel Ramaroson na i Mika, filohan'ny federasiona malagasin'ny basket ball. (Tapatapany)
Chelsea (nitranga in-1) : Vokatra
TATA (nitranga in-1) : Roa lahy izy ireo no mpamily, irony fiara mpitatitra olona marika TATA irony, mampitohy an'Anta-nanarivo sy Taolagnaro. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
mahatara (nitranga in-1) : Nisy fanitsiana nasaina nataon'ireo kaompania saingy tsy mbola tonga aty aminay io fani­tsiana io ka mahatara ny fandoavana ireo faktiora». (TROSA AMIN’NY FANJAKANA-Ar 18 000 tapitrisa ny taratasin-tsolika tsy voaloa hatramin’ny septambra teo)
Ambatofinandrahana (nitranga in-2) : ny 16 oktobra hifoha ny 17 lasa teo, tamin'ny 3 ora maraina, no saron'ny vela-pandrika nataon'ireo polisy ireo olona miisa enina anaty fianakaviana iray voalaza fa mpivarotra taolam-paty tao Ambatofinandrahana, araka ny vaovao voaray avy amin'ny
sampana misahana ny serasera eo anivon'ny polisim-pirenena. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
nampanaovina (nitranga in-1) : Voalaza fa fidirana an-keriny hanao takalon' aina ireo mpikamban'ny governemanta mihitsy no iraka nampanaovina ireto andiana miaramila ireto. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
naharay (nitranga in-1) : Efa nandritra ny roa volana no naharay fitarainana ny polisim-pirenena avy ao Ambatofinandrahana momba ny vaky fasana izay miha mahazo laka. (VAKY FASANA-Tratran’ny vela-pandrika ireo mpangalatra taolam-paty)
sasantsasany (nitranga in-2) : Nandritra ny lalao dia nanambara ireo mpilalao sasantsasany fa nisy mpilalao iray niresaka tamin'ny mpilalaon'ny Cnaps hoe: “manaova amin'izay fanafihana”, araka ny fitantaran'ity filohan'ny Tana Formation ity. (FAMOAHANA NY VOKA-PIFIDIANANA-Ho fantatra amin’ny faran’ ny herinandro ny vokatra any amin’ireo tanàn-dehibe)
nikarakara (nitranga in-1) : «Tsy tany an-toerana izahay tamin' ny andro nahafatesany fa nikarakara fivoriana, ka ny reniben'ny no nitaiza azy sy ny zandriny telo volana», hoy hatrany ny rain'ilay zaza. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
noentiny (nitranga in-1) : Raha handeha hijery ny tsindry hisatra tao ambanin' ilay fiara vaventy noentiny ny mpamily iray no nandroso tampoka ny fiara ka notetezin'ireo kodiarana avy hatrany ny tapany am-boniny rehetra. (LOZA HAFAHAFA-Maty notetezin’ny fiara nentiny ilay mpamily)
hiaingan' (nitranga in-1) : Tany am-piandohana dia saika ny 26 oktobra, aorian'ny fifidianana filoham-pirenena no voatondro fa hiaingan'izy ireo. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
nanomezan' (nitranga in-1) : “Nisy anefa fihetsika tsy niniana nataon'i Santatra saingy nanomezan'ny mpitsara karatra mena azy”, hoy ihany i Hery Rasoamaromaka. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
Itasy (nitranga in-3) : Toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Menabe, Boeny, Matsiatra Ambony. (KITRA – FIVAROTANA LALAO-Hanokatra fanadihadiana sy hitory ny mpitantana ny Tana Formation)
Zimbaboe (nitranga in-1) : Aorian'io dia mbola hifampiresaka amin'ny federasiona aho amin'ny mety hijanonako eto, izay efa nambarako matetika ny fahavononako”, hoy i Philippe Canitrot, izay nitondra an'i Zimbaboe nanilika an'i Madagasikara teo amin' ny manasa-dalan'ny Can 2013 vondrona A. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Olympique (nitranga in-1) : Vokatra
mifehy (nitranga in-2) : Hatreto ihany koa dia fantatra fa mbola tsy voarain' ireo mpikambana eo anivon'ny Parlemantan'ny tetezamita ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2014. (Efa vonona handray fepetra hentitra hiarovana ny fifidianana ny Foloalindahy)
rainy (nitranga in-9) : «Tena hainy tsianjery hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io hira io», hoy ny rainy, Randrianarivelo Henintsoa Elie, izay hita ho mbola tena ao anatin'ny fangirifiriana tanteraka. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
nangatahan' (nitranga in-1) : Mbola misy lalan-kely efatra hafa ilaina fanamboarana eto amin'io fokontany io, ka nangatahan'ireo mponina fanavaozana ihany koa. (FOTODRAFITRASA-Nohavaozina ny lalan-kely eny Ambondrona-Ambodifilao)
nahatratra (nitranga in-1) : «50 monja ary tsy nahatratra ny antsasa-manila ireo mpikambana niatrika ny fivoriana ka tsy nisy ny fanapahan-kevitra azo noraisina mahakasika ireo raharaha ireo. (PARLEMANTERA-Be mpingitrika ka nahemotra ny fivoriambe voalohany)
hankalaha (nitranga in-1) : Manjary hankalaha lehilahy ilay zaza ary mety tsy hanam-pitokisana amin'ny lehilahy intsony. (FIAINAN-TOKANTRANO-Mitarika ny fanolanan-janaka ny tsy fahatontosan’ny fanabeazana)
nitaiza (nitranga in-2) : «Tsy tany an-toerana izahay tamin' ny andro nahafatesany fa nikarakara fivoriana, ka ny reniben'ny no nitaiza azy sy ny zandriny telo volana», hoy hatrany ny rain'ilay zaza. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
fisokajiana (nitranga in-1) : tANTARA MITOHY
nanainga (nitranga in-1) : nanainga afak'omaly maraina tany Nosy-Be ireo mpitandro ny filaminana nitondra ireo olona 13, anisan' ireo voarohirohy tamin'ireny korontana niafara tamin'ny famonoana olona sy famo-tehana fananan'olona tamin' ny fiandohan'ny volana oktobra ireny. (FIKOMIANA TANY NOSY-BE-Niampy 13 indray ireo hatolotra ny Fampanoavana eto Antananarivo)
mpilalaon' (nitranga in-2) : Nandritra ny lalao dia nanambara ireo mpilalao sasantsasany fa nisy mpilalao iray niresaka tamin'ny mpilalaon'ny Cnaps hoe: “manaova amin'izay fanafihana”, araka ny fitantaran'ity filohan'ny Tana Formation ity. (RUGBY – CAN 2014-Tsy afaka mifidy Filoham-pirenena ireo Makis ho any Sri Lanka)
Manambondro (nitranga in-1) : Nivadihan'ny namany > Teratany Frantsay iray no nivadihan'ny namany, izay mpanamboatra ny fiarany ihany, tao Manambondro, distrikan'i Vangaindrano, ny 20 oktobra teo, tamin' ny 10 ora alina. (Sombiny)
Ranjamanana (nitranga in-1) : Ranjamanana Agnès, reniben'i Sylvie
nahalalana (nitranga in-1) : Tatitra avy amina manamboninahitra iray eo anivon'ny zandarimariam-pirenena izay nisafidy ny tsy hitonona anarana no nahalalana fa nisy andiana miaramila voalaza fa saika hanafika ity lapa ity, ny talata lasa teo. (FANAHIANA FANAFIHANA-Voahodidin’ny zandarin’ny Gsis ny lapan’i Mahazoarivo)
teto (nitranga in-3) : Maro ny olona efa nianjera teto. (HANDBALL NASIONALY-Tsy hisy ny solontena avy amin’ny faritra atsimo)
nangatahany (nitranga in-1) : Ho fitakiana ny famerenana amin'izy ireo ny tany nato-kana ho fiantsonan'ny fiara, izay nangatahany tamin'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) ary efa nazahoany fankatoavana, dia nanapa-kevitra ny tsy hifidy izy ireo ny zoma izao. (TSENAN-TSOLOMASO ANDRAVOAHANGY-Milaza ny tsy hifidy ireo mpivarotra sy ny fianakaviany)
Happel (nitranga in-1) : Isan'ireny ny teo amin'ny andro fahatelo ka nandavoan' izy ireo tamin'ny isa 3 no ho 0 ny Austria Vienne, tao amin'ny kianja Ernst Happel Stadion Vienna. (KITRA – CHAMPIONS LEAGUE-Ny Atletico Madrid no efa nahita fandresena telo)
handraisan' (nitranga in-1) : Manantena ny hisian' ny fitoniana ihany koa ny Ffm ary nitaky ny handraisan'ireo manam-pahefana rehetra ny andraikitra mifanandrify amin'izy ireo avy. (VOKA-PIFIDIANANA-Nangataka an’ ireo kandida mba ho tony ny Ffm)
hamonjy (nitranga in-2) : Saika hamonjy an-drainy ity zazalahy ity no voatifitra, hoy ny zandarimariam-pirenena. (ZAZA ROA TAONA NAMOY NY AINY-Nitarika matetika an-drainy hivavaka i Sylvie talohan’ny nahafatesany)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/24_Oktobra_2013&oldid=13022164"
Voaova farany tamin'ny 24 Oktobra 2013 amin'ny 21:06 ity pejy ity.